ထိန်ပင် သင်္ချိုင်း မျက်မြင်ကိုယ့်တွေ့ အဖြစ်အပျက်များ – Wun Yan
မနေ့က ဖခင်ကြီးသဂြိုလ်ဖို့ ကိစ္စနဲ့ ထိန်ပင်သုသာန်ရောက်ခဲ့တယ်။ အလောင်းတွေဆိုတာ မီးသဂြိုလ်စက် ရှေ့တွေမှာပုံထားတာ တောင်ပုံ ရာပုံကိုဖြစ်နေတယ်.။ အချို့တော့ အခေါင်းတွေနဲ့ထည့်ထားပြီး အချို့တော့ ဒီတိုင်း အိတ်အမဲတွေနဲ့ ပတ်ထားတယ်.။ ဒီကြားထဲမှာ ဖျာလိပ်တို့ အိပ်ယာလိပ်တို့နဲ့ သေချာထုပ်ပိုးထားမှုမရှိတဲ့ အလောင်းတွေဆိုတာလည်း မရေတွက်နိုင်ဘူး။
ပုံမှန်ဆို Dead body ကို HSE ယာဉ်နဲ့ သာ သယ်ယူပို့ဆောင်ရတယ်ဆိုပေမဲ့ ဒီကာလမှာတော့ Probox Taxi နဲ့ကော Light Trucks တွေသယ်လာပြီး လာပို့ကြတယ်. တချို့ကားတွေပေါ်မှာဆိုရင် အလောင်းသုံးလောင်း လောက်ပါကြတယ်။
အခေါင်းတစ်လုံးကို အနည်းဆုံး တစ်သိန်းနှစ်သောင်း (၁၂၀,၀၀၀) စျေးရှိတယ်. လိုခြင်ရင်တောင်ချက်ချင်းမရတော့ ပိုက်ဆံမတတ်နိုင်ကြတာကော ပေါင်းပြီး အလောင်းတွေက ဖျားလိပ် အိပ်ယာလိပ်တွေနဲ့ဘဲ မီးသဂြိုလ်စက်တောက်လျှောက် ပြန့်ကျဲနေတယ်။
ကိုယ်တွေ့သလောက် သင်းချိုင်းမှာ စနစ်တကျ စီမံပေးမဲ့သူလည်း မရှိဘူး. တာဝန်ယူ တာဝန်ပေးခံထားရတဲ့သူတွေလည်း အတော့်ကိုနည်းပါးတယ်. အရပ်သုဘရာဇာလိုလို ပရဟိတသမားတွေလိုလို လူတွေကဘဲ ကိုယ်ထင်တဲ့ပုံစံအတိုင်း လာရောက်လြပ်ကိုင်နေတယ်. တခါတလေ အချင်းချင်းတွေလည်း ရန်ဖြစ်ပြီး အလုပ်မတွင်တာတွေလည်း ရှိတယ်။
အလောင်းတွေကိုင်တွယ်လုပ်ကိုင်နေတဲ့ လူတွေကလည်း ဘာsafety protocol မှ လိုက်နာခြင်းမရှိ အကာအကွယ်ယူထားခြင်းမရှိဘဲ PPE ဝတ်စုံမပြောနဲ့ အခြေခံ mask လေးတောင်မတတ်ထားကြဘူး. အသုဘရှင်တော်တော်များများ ကလည်း ကိုဗစ်ပိုးတွေကူးစပ်ခံထားရတဲ့ လူနာတွေရဲ့ မျက်နှာတွေလို နီးမြန်းရောင်ယမ်းနေကြတယ်။
တချို့လည်း ငိုထားကြလို့ မျက်နှာတွေ အမ်းနေကြတယ်. လူတိုင်းရဲ့ မျက်နှာတွေမှာ သောကဘယ်လပွနဲ့ ဝမ်းနည်းပူဆွေးနေကြတယ်. တချို့လည်း သင်းဂြိုလ်ဖို့စောင့်ဆိုင်းတဲ့ သူတွေရှိသလို တချို့လည်း ဒီအတိုင်းချထားခဲ့ကြတယ်။
သေသောသူတွေရဲ့ အသက်မဲ့ခန္ဓာကိုယ်တွေဟာလည်း မြေပြင်မှာပုံပြီးချထားကြတာ လူ့ဘဝရဲ့နောက်ဆုံးအချိန်လေးမှာတောင် လူ့သိက္ခာဆိုတာ တစက်ကလေးတောင် မရှိတော့တဲ့ ငါတို့ပြည်သူတွေ ဘဝပါလား။
စစ်အစိုးရဟာဆိုရင်လည်း သူတို့အုပ်ချုပ်တာ တစက်မှမခံတဲ့တိုင်းသူပြည်သားတွေကို အညှိုးကြီးကြီး ရက်ရက်စက်စက်ကို ကံကြမ္မာငင်စေတာ နောက် တစ်ပတ်လောက်ဆိုရင် သုသာန်တွေဟာ အပုတ်နံတဟောင်ဟောင်နဲ့ ခြေချစရာမကောင်းတဲ့ နေရာတစ်ခု ဖြစ်ပြီး နောက်ထပ်ကူးစပ်ရောဂါအသစ်တွေတောင် ထပ်ပြီး ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တယ်။
မြန်မာနိုင်ငံဟာ နဂိုကတည်းက သန့်ရှင်းရေး အားနည်းတဲ့ နိုင်ငံ တစ်ခုဖြစ်တာကြောင့် COVID မျိုးကွဲတွေဖြစ်တဲ့ Alpha, Beta, Gamma & Delta တို့ပေါ်ပြီး သကာလ နောက်ထပ်ကိုဗစ် ဗီဇမျိုးကွဲ Epsilon ဟာဆိုရင်ဖြင့် မြန်မာပြည်က ထွက်မလာနိုင်ဘူးလို့ မပြောနိုင်ဘူး။
ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ် ကောင်းမွန်စွာ သင်းဂြိုလ်မခံရသေးသော သေသောသူများရဲ့ ဝိဥာဏ်များ ကောင်းရာမွန်ရာလားကြ၍ ဘဝဆက်တိုင်း ဒီလိုမင်းဆိုးမင်းညစ်များရဲ့ကောက်ကျစ်ခြင်းရန်မှ ဝေးကြပါစေ။
Credit @ မူရင်းတင်သူသို့
သေသွားတဲ့ မိန်းမ သံသရာမှာ မကျွတ်လွတ်မှာ အရမ်း စိုးရိမ်လို့ပါတဲ့ ကတိသစ္စာတွေ တည်မြဲလိုက်တာဗျာ
ဘာနဲ့မှလဲလို့ မရတဲ့ မိဘမေတ္တာ ကြီးမားတယ်ဆိုတာ
ယခုလိုကာလမှာ အပြင်သွားပြီး ပြန်လာတိုင်း မတ်စ်(Mask)တွေကို တစ်ခါတည်း စွန့်ပစ်ပါ
ဒီလို ခေတ်ပျက်ကြီး အတွင်းမှာ ရိုးသားပြီး ကိုယ်ချင်းစာစိတ်ရှိသူ တချို့ ရှိသေးတယ်ဆိုတာ ဒီနေ့ကိုယ်တိုင် ကြုံတွေ့လိုက်ရတယ်
← ၁၆.၇.၂၀၂၁ ချဲ၊ သုံးလုံးထီ တိုက်ရိုက် ထုတ်လွှင့်မှု
အောက်ဆီဂျင်ကျလို့ အရေးပေါ်ကို ပို့ခဲ့ရတဲ့ ကလေးလေး ကွယ်လွန်ပြီ →